Ny sambo mpiasan'ny sambo: iza ary inona ny asany | Fitsangatsanganana tanteraka
Ny sambo mpiasan'ny sambo: iza no ary inona no asany
Ana Lopez | | General, Mba hiasa
Te hiasa amin'ny sambo fitsangantsanganana ve ianao fa tsy fantatrao hoe, na iza no ao anaty sambo sa inona no asany? Manome anao ny famantarana rehetra momba ny ekipa izahay. Tadidio fa ho an'ny maro sy maro ny miasa amin'ny sambo fitsangantsanganana dia tsy asa fotsiny, io dia momba ny fomba fiainana kokoa izay ahalalanao ny zom-pirenena, fivavahana, fomba fiainana, traikefa, toerana ... tsy mahafinaritra ny zava-drehetra, tontolo fifehezana henjana izany.
Tianay amin'ity lahatsoratra ity ihany koa ny manampy anao hahafantatra ny tabilao fandaminana ny fomba fiasa fitsangantsanganana an-tsambo, ary hahafantatra hoe iza no hitodika amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo, mba hamahana ny fanontanianao avy hatrany.
1 Karaman'ny mpiasa
2 Fiasan'ny mpiasa
Ny iray amin'ireo mizana izay raisina indrindra rehefa mandrafitra ny ekipa dia ny karama, ary tsy olana madinidinika izany. Tsara ny karama, Ny fiheverana indrindra fa tsy handanianao trano sy sakafo, ao anatin'izany ny fanamiana izay tokony hataonao eny ambony sambo. Ho an'ny ekipa misy serivisy sy faritra iraisana izay misy: bar, Internet, fanasan-damba, gym, solarium ary dobo filomanosana (amin'ny sambo sasany ihany).
Ny fandoavana dia atao amin'ny euro na dolara, Araka ny filazan'ny orinasan-tsambo ary atao an-tsambo mihitsy. Amin'ny ankapobeny Mahazo karama raikitra ianao, komisiona mivarotra ary fizarana torohevitra. Ny toro-hevitra omen'ny vahiny tsirairay anao dia tsy isaina. Hahafantatra bebe kokoa momba ny lohahevitra torohevitra azonao vakiana Ity lahatsoratra ity.
Ny orinasan-tsambo rehetra, miondrana eo ambanin'ny sainam-pirenenan'izy ireo dia fehezin'ny MLC 2006 (Maritime Labor Convention 2006) izay mifehy ny UNWTO (World Labour Organization) sy ny IMO (International Maritime Organisation).
Izahay dia manome ny salanisa ho an'ny karama isam-bolana amin'ny taona 2017, fa ny orinasam-pandefasana tsirairay avy dia samy manana ny politikany momba ny karama. Mba hanomezana hevitra anao fotsiny:
Mpiandry trano fisakafoanana 1.500 euro + torohevitra sy kaomisiona.
Mpandroso sakafo, mpanasa vera, latabatra fanaovana buffet madio 800 euro
Cooks (misy hierarchies 3) manomboka amin'ny 900 ka hatramin'ny 1.600 euro. Ary ity sokajy ity dia tsy misy maitres, na chef fisakafoanana.
Cleaners 1.100 euro.
Sarimiaina ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe 1.300 euro.
Ao koa ny fialamboly, mpanakanto ary stagehands. Manefa araka ny teti-bola izy ireo. Indraindray dia miankina amin'ny orinasam-pamokarana fampisehoana izy ireo ary ny hafa amin'ny orinasam-pandefasana.
Fiambenana 2.000 euro.
Dokotera 3.500 1.500 euro sy mpitsabo mpanampy XNUMX euro
Injeniera faharoa 7.500 euro
Kapiteny 20.000 XNUMX euro
Araka ny efa nolazainay teo aloha, ireo sanda ireo dia manondro ary ny orinasa tsirairay dia samy manana ny politikany momba ny tambin-karama. Indraindray ny mpiasan'ny fivarotana sambo, ny casino ary ny spa dia raisin'ireto marika marika ara-barotra ireto izay manome ireo serivisy ireo fa tsy ny orinasan-tsambo.
Fepetra takiana hiasa amin'ny sambo fitsangantsanganana
Mba tsy hifaneraserana aminao amin'ny lisitra hafa misimisy kokoa dia hizara ny asa an-tsambo ho faritra efatra izahay:
La fonony. Izy rehetra ireo no tompon'andraikitra izay izy ireo no mitantana ny sambo, eo amin'ny tetezana izy ireo. Eo an-tsisin'ny piramida dia ny kapiteny ary ny manamboninahitra rehetra dia tokony hohamarinin'ny Sekolim-panjakana ofisialy sy ranomasina mpivarotra.
ny MILINA: Izy ireo no teknisiana sy injeniera tompon'andraikitra amin'ny hetsika mekanika sy elektrika an'ny sambo iray manontolo. Aza mieritreritra afa-tsy ny maoteran'ilay sambo, izay mpiasa miandraikitra ny fikojakojana marina ny sambo dia miditra amin'ity faritra ity. Ny toerana ambony indrindra dia ny lohan'ny efi-motera.
La hostelry: Izy ve mpiasa an-tsambo maro be ary mandrafitra ny ampahan'ny fivahinianana an-tsambo. Ho setrin'izany dia mizara departemanta toy ny fialamboly, toeram-ponenana, fitantanan-draharaha, sakafo sy zava-pisotro izy ireo ... karakarain'ny talen'ny Cruise.
Hospital: Izy ireo no mpitsabo mpanampy sy mpitsabo miandraikitra ny hopitaly ao anaty sambo. Matetika tsy misy dokoteran-jaza.
Manantena izahay fa miaraka amin'ity fanasokajiana ity dia nanampy anao izahay rehefa niondrana an-tsambo ary niresaka tamin'ny matihanina tsirairay tamin'ny fotoana mety.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » General » Mba hiasa » Ny sambo mpiasan'ny sambo: iza no ary inona no asany
Misy fandrakofana hampiasa ny finday amin'ny fitsangantsanganana?
Fitsangatsanganana an-dranomasina, izao no fotoana hisafidianana azy ireo